संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पाकिस्तानी प्रतिनिधिले सार्वजनिक रुपमै गाली खाएपछि……. « Sajilokhabar
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पाकिस्तानी प्रतिनिधिले सार्वजनिक रुपमै गाली खाएपछि…….
न्यूयोर्क,२९ साउन । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पाकिस्तानी स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधीलाई एक पाकिस्तानीले सार्वजनिक रुपमै गाली गरेका छन् ।
हालै सार्वजनिक भएको भिडियोमा अमेरिकामा कुनै कार्यक्रम सकेर बाहिरिएपछि उनी सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिइरहेकी थिइन् ।
यतिकैमा एक व्यक्तिले बिचैमा उनको कुरा काटेका थिए । त्यसपछि उनले एक्कासी ‘तिमी चोर हौ र पाकिस्तानको प्रतिनिधित्व गर्न अयोग्य छ्यौ’ भन्छन् । अमेरिकामा एक कार्यक्रम सकेर बाहिरिँदै गर्दा एक जनाले लोधीलाई भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
त्यसपछि लोधीले उनलाई आफ्नो बोली बन्द गर्न भन्छिन् तर, उनले आफूले कुनै लगत काम नगरिरहेको र आफू पाकिस्तानी भएकाले आफूलाई बोल्ने हक भएको बताउँछन् । त्यसपछि केही शान्त हुँदै लोधीले ती पाकिस्तानीलाई उसको व्यवहार देखेर हप्काउँछिन् । उनले उक्त पाकिस्तानीको प्रश्नको जवाफ नदिने समेत बताउँछिन् ।
त्यसपछि लोधी त्यहाँबाट हिँड्न लागेकी थिइन्, यतिकैमा उनी फेरि चिच्याए, ‘तिमीहरु हाम्रो पैसा चोरिरहेका छौं, तिमीहरु पाकिस्तानको प्रतिनिधित्व गर्न योग्य छैनौं ।’
यतिकैमा लोधी केही पर पुगिसकेकी थिइन्, ती पाकिस्तानीले उनलाई पछ्याउन खोजे तर त्यहाँ उपस्थित मानिसहरुले उनलाई शान्त पार्न खोज्छन् । उनी फेरि चिच्याउँछन्, ‘तिमीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, यतिका वर्षदेखि तिमीहरु हाम्रो पैसा मात्र खाइरहेका छौँ ।’
हाल सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो भाइरल भइरहेको छ । केही पाकिस्तानीहरुले लोधीप्रति गरिएको व्यवहारको आलोचना गरेका छन् भने अधिकांश पाकिस्तानीले लोधीलाई गाली गर्नेलाई स्याबासी दिएका छन् ।